China Laser salon ntutu akụrụngwa na-ahọrọ igwe maka ntutu mwepụ akpụkpọ rejuvenation ipl laser DY-A4 rụpụta na ụlọ ọrụ | Danye
Laser salon ntutu akụrụngwa na-ahọrọ igwe maka ntutu mwepụ akpụkpọ rejuvenation ipl laser DY-A4
Medical elu ike OPT, ọtụtụ-ewu ewu na ọgwụ na ụlọ ọgwụ maka dọkịta were; Ọkachamara abụọ na-arụ ọrụ aka: SR 560nm njikwa, HR695nm
Super IPL + RF (SHR) Sistemụ bụ IPL SHR kwalitere yana otu usoro ihe ọkụkụ na-enye ike dị elu tinyere ọrụ RF dabere na teknụzụ IPL / E-Light nkịtị, ọ na-agwakọta ụdị ọrụ 4 site na njikọta akpụkpọ anụ: IPLSHR / SSR + Standard HR / SR + E-light + Mgbasa Ozi Igwe Bipolar. Mgbe mmadụ anọ ahụ dị n'otu n'otu ọgwụgwọ, enwere ike ịtụ anya ahụmịhe na nsonazụ magburu onwe ya. Ike nke Frequency Radio nwere ike iru akwa anụ ahụ dị omimi ma kpoo anụ ahụ ọkụ, si otú a na-etinye ike dị ala n'oge ọgwụgwọ IPL. Obi erughị ala n'oge ọgwụgwọ IPL ga-ebelata nke ukwuu ma enwere ike ịtụ anya nsonaazụ ka mma. Tụkwasị na nke ahụ, usoro jụrụ oyi dị na nnukwu IPL + RF nwekwara ike belata ahụ iru ala. Ike ikuku redio anaghị eche banyere melanin. Yabụ, ọgwụgwọ super IPL + RF nwere ike nweta nsonazụ ọma na ntutu dị nro ma ọ bụ dị nro iji belata ihe egwu nke IPL na-ebute.
1. Ọkpụkpụ Skin rejuvenation: ezigbo wrinkles gburugburu anya, ọkpọiso, egbugbere ọnụ, olu mwepụ, anụ tightening ka mma mgbanwe na ụda nke pigments anụ ahụ, anụ ọcha, pore shrinking, mgbanwe nnukwu ntutu pores;
2. Iwepu Ntutu Ọsọ maka ahụ niile gụnyere anụ ahụ na-acha ọkụ, wepụ ntutu site na ihu, egbugbere ọnụ elu, agba, olu, obi, ogwe aka, ụkwụ na ebe bikinis;
3. Wepụ ihe otutu: meziwanye onodu nke mmanu mmanu; gbua ụnu bacilli;
4. Vaskụl ọnya (telangiectasis) iwepụ maka ahụ dum;
5. ink iwepụ tinyere ntụpọ, gara aga tụrụ, anyanwụ tụrụ, Cafe tụrụ wdg;
Hkpụrụ HR / SR ziri ezi
Ike IPL 0-50J / cm2
Ogologo ebili mmiri 560nm-1200nm ìhè & RF mmepụta;
695nm-1200nm ìhè & RF mmepụta;
Nọmba ọnụọgụ 1-6pcs
Obosara usu 1-10ms
Igbu oge 5-100ms
Igbapụta oge 1-3s
Abù size 560nm 8 * 34mm,
Ike RF 0-50J / cm2
SHR / SSR ọnọdụ
Nọmba ọnụọgụ 1pcs (ofu)
Ugboro 1-5Hz RF
Ike 0-50J / cm2
Ngosipụta ihuenyo 10.4 inch agba ihuenyo mmetụ
Usoro jụrụ igwe mmiri + nnukwu radiator + semiconductor jụrụ + ikuku jụrụ
Nke gara aga: Danye redio ugboro ole ndọlị mwepụ igwe na-eweli igwe thermagic 6.78MHz
Multifunctional obere IPL / Elight DY-A201
epilacion laser ipl ufiop usu ìhè laser e ...
Vetikalik Ekele na-adịgide adịgide ntutu mwepụ igwe ...
Ebube Ehi + RF 3 na 1 Sistem DY-B101
Mma ngwa ipl sapphire ntutu mwepụ lase ...